Our Legacy – Hanoolaato Somalia National Party
Maxaa Nalaga Dhaxli Doonaa
Lacag Nagu Dheeq
Hanoolaato Maxaa laga Dhaxli Doonaa
Waxaan rajeynaynaa in nalaga dhaxlo dal wanaagsan oo sharci, kala dambeyn, hor’umar dhaqaale, hor’umar siyaasadeed, hor’umar waxbarasho iyo mid caafimaad intaba gaaray. Waxaan rabnaa in aan reebno dal kafiican kii aan anagu waalidkeen kadhaxalnay. Waxaan rabnaa in aan dadkeena midayno oo naceybka, kala qeybsanaanta iyo iska shakiga kasaarno. Waxaan rabnaa in aysan awlaadeena lakulmid dhibaatooyinka aan anaga lakulanay oo dhib iyo dhaawac dhinac kasta ah inoo geystay. Waxaan rabnaa in nalaga dhaxlo dal iyo dad isku duuban oo dantooda udareeraya.
Sideen Ku Gaari Doonaa
Abuurid Jawi Dagan
Waxaan kugaari doonaa hadafkeenaas in sharciga dalkeena aan sareysiino oo aan anaga iska bilowno oo sharciga ixtiraamno oo sidiisa ugu dhaqano uno hogaan sanaano. Waxaan iska saxi doonaa luuqadeena oo aan kasaari doonaa wax walba oo shacabkeena dhib ukeeni kara, kala qeybin kara, naceyb nagu dhex beeri kara si aan u abuurno jawi dagan oo kaalmaynaya wax soosaarka, waxbarashada, hal abuurnimada iyo hor’umarka oo dhan. Waxaan rabnaa in aan shacab keena kadifaacno wixii raba in ay wax udhimaan naftooda, sharaftooda iyo maalkooda si ay ayaguna ugu mashquulaan si ay noloshooda iyo tan kuwa ay mas’uulka kayihiin uhor’mariyaan.
Waxaan kasaarnay luuqadeena hanoolaato dhexdeeda iyo tan hanoolaato iyo shacabka Soomaaliyeed udhexeysa
cay oo dhan sideedaba
magac qabiil sikastaba ha ahaatee xitaa amaan
eedeyn aysan ahayn ujeedadeedu iftiimin iyo wax saxid
shaqsi jeceyl iyo shaqsi neceyb
iyo wax walba oo naceyb keeni kara
La dagaalanka musuqmaasuq
Musuqmaasuqa waxay dadka badanaa ku tilmaamaan in uu yahay kanserka wadamada kudhaca. Waa sidii cudur oo kale oo haduu dalka galo gudaha kabaabi’inaayo ilaaa uu marka dambe diloodo. Waa cudur halis ah oo tartiib dalka udiloonaaya hadii aan laiska qaban oo waliba gacan adag laiskaga qaban.
Hadaba Hanoolaato way kubaarugsan tahay musuqa iyo wuxuu yahay waana ladiriri doonaa mana joojinayno ilaa iyo inta aan Soomaaliya oo dhan kadhameynayno. Ladagaalanka musuqa wuxaan ka wajihi doonaa dhinacyo badan.
Dowladaheena waxay kudhisan yihiin nidaamka awoodaha lakala qeybiyay laiskuna dheelitiray oo loogu yaqaano luuqada ingiriiska (checks and balances) kaas oo loogu talagalay in lagu xakimeeyo musuqa iyo ku takrifalka awoodaha dowladeed. Hanoolaato way xoojinaysaa nidaamkaan wayna baahinaysaa dhagan galkiisa. Hanoolaato waxay kaloo dhaqan galinaysaa daahfurnaanta dowlada oo waliba sharciyo soo diyaarinaysaa ku khasbaaya dowladaha oo dhan in ay wax walba oo ay qabtaan, soo gala ama ka baxa ayadoo qoraal ah soo diyaariyaan kuna soo bandhigaan websiteka dowlada si muwaadin kasta uu si fudud ulasocdo hadii uu rabo. Waxaan rabnaa in mas’uul kasta oo xil qaban raba uu marka hore laga diwaan galiyo xoolihiisa oo dhan iyo inta lacag oo kash ah oo uu heysto. Waxaan rabnaa in mas’uul kasta ay mamnuuc kanoqoto in uu hadiyad aqbalo in uu qaato nooc kastaba ha ahaatee. Waxaan rabnaa in mas’uulkii sharciyadaas jabiya la maxakamadeeyo hadii dambi lagu helana ciqaab teeda la mariyo. Waxaan rabnaa in fursadaha shaqooyinka dowlada loo sinaado aqoon iyo waxqabadna lagu bixiyo oo waliba hadii ay suuragal tahay shaqo bixiyaha iyo shaqo qoraaga aysan isku mid noqon. Shaqo bixiyaha uu awood ulahaado uu kula xisaabtamo shaqaalaha hoos imaanaya, haduu kasoo bixi waayana ceyriyo, laakiin uusan asaga soo qorin. Waxaan rabnaa in shaqaale kasta iyo isticmaalaha adeega dowlada labadaba ay dacwoon karaan oo waliba dacwadaas meesha ay marayso ay khasab noqoto in lalasocodsiiyo qofka soo dacwooday. Waxaan rabnaa in shaqaalaha dowlada ay marka horeba mushahar kufilan lasiiyo si aysan danta tooda iyo daruufaha aysan ugu kalifin in ay wax xadaan ama musuqmaasuqaan. Waxaan rabnaa in sameeyo nidaam lagula socon karo wax qabadka ama wax soosaarka shaqaalaha dowlada si shaqooyinka dowlada aysan unoqon kuwo aan waxba laqaban laakiin mushahar kaliya laga qaato. Waxaan rabnaa in uu jiro nidaam aan saamaxaynin in shaqaale dowladeed ay lacag aad ubadan oo kash ah aysan gacantiisa ugu hakan ama ugalin si aan damac uga ilaalino in uu qaado. Waxaan rabnaa wax walba oo ay dowlada bixiso, iibiso ama soo gala in ay raadraac leeyihiin.
Liiska intaan kuma eka. Asagoo intaan kabadan si sidaan kafiicana loosoo diyaariyaya loona soo qoran ayaan keeni doona Insha Allah.
Aan Lawadaagno Xogta
Kala Soco Inta Hanoolaato
Imeel ayaan kuugu soo diraynaa akhbaarteena oo dhan hadaad kor kuqortid iimail kaaga